Akwukwo Web Weputara site na ndi okachamara ura
Nchịkọta weebụ bụ nanị usoro nke mmemme mmepe, robots, ma ọ bụ bọọlụ nke nwere ike wepu ọdịnaya, data, na ihe oyiyi sitere na weebụsaịtị. Ọ bụ ezie na nyocha ihuenyo nwere ike naanị iṅomi pixels egosiri na onscreen, ntanetị weebụ na-efesa koodu HTML niile na data niile echekwara na nchekwa data. Mgbe ahụ, ọ nwere ike ịmepụta ihe ọzọ nke ebe nrụọrụ weebụ ebe ọzọ - buy fascinators wholesale.
Nke a bụ ihe mere e ji eji weebụ nyochaa ugbu a na azụmahịa dijitalụ nke chọrọ nchịkọta data. Ụfọdụ n'ime iwu eji eji weebụ scrapers bụ:
1. Ndị na-eme nnyocha na-eji ya wepụ data sitere na mgbasa ozi na ndị nnọchiteanya.
2. Ụlọ ọrụ na-eji bọtịnụ wepụ ahịa site na ebe nrụọrụ weebụ ndị asọmpi maka nyocha ọnụahịa.
3. Ụlọ ọrụ ntanetịị chọọ ntaneti mgbe niile maka nzube nke ogo.
Ngwá ọrụ na bots
Ngwaọrụ scraping weebụ bụ ngwanrọ, ngwa, na mmemme na-enyocha site na databasị ma wepụ ụfọdụ data. Otú ọ dị, a na-emepụta ọtụtụ ndị na-eme nnyocha iji mee ihe ndị a:
Wepụ data site na APIs
Chekwaa data amịpụtara
Ebe nrụọrụ weebụ HTML
Ebe ọ bụ na bọtịnụ ziri ezi na obi ọjọọ na-ejekwa otu nzube ahụ, ha na-abụkarị otu. Lee ụzọ ole na ole ị ga-esi dị iche na nke ọzọ.
Ndị ọkà mmụta ziri ezi nwere ike ịchọtara ya na nzukọ nke nwe ha. Dịka ọmụmaatụ, bọtịnụ Google gosipụtara na ha bụ Google na ha na-akpọ HTTP ha. N'aka nke ọzọ, enweghi ike ijikọta bọọlụ ọjọọ na nzukọ ọ bụla.
Bots ndị ziri ezi kwekọrọ na robot..faịlụ txt ma ghara ịgabiga akwụkwọ ha na-ahapụ ka ha kpochapụ. Mana bọọ ọjọọ na-emebi ntụziaka nke onye ọrụ ma kpochapụ ya site na ibe weebụ ọbụla.
Ndị ọrụ chọrọ itinye ego dị ukwuu na sava maka ha ka ha nwee ike iwepụ ọtụtụ data ma dezie ya. Nke a bụ ihe mere ụfọdụ n'ime ha ji eji botnet eme ihe. Ha na-ejikarị ụdị malware ahụ na-ekesa usoro mgbasa ozi nke ala na-achịkwa ha site na ebe etiti. Nke a bụ otú ha si enwe ike iwepụ data buru ibu n'ọtụtụ dị ala karị.
Onye na-eme ụdị ụdị iwe a na-eji botnet nke a na-eji eme ihe nchịkọta iji kpochapụ ọnụahịa nke ndị asọmpi. Ebumnuche ha bụ ịhapụ ndị na-asọmpi ha ebe ọ bụ na ọnụ ala bụ ihe ndị kasị mkpa ndị ahịa na-atụle. O di nwute na, ndi mmadu ndi na-ere ihe ahia ga-aga n'ihu izute nzoputa nke ndi ahia, ihe ndi ahia, na ihe ndi mmadu ji enweta ego mgbe ha na-eme ihe ga-aga n'ihu inwe obi uto.
Nchịkọta ọdịnaya bụ nnukwu nchịkọta iwu na-akwadoghị ọdịnaya site na saịtị ọzọ. Ndị na-enweta ụdị ụdị ohi a bụkarị ụlọ ọrụ ndị na-adabere na kọntaktị ngwaahịa ngwaahịa maka azụmahịa ha. Ebe nrụọrụ weebụ na-eduzi azụmahịa ha na ọdịnaya dijitalụ na-adịkarị mfe ịpịpụta ọdịnaya. N'ụzọ dị mwute, ọgụ a nwere ike imebi ha.
Nchedo Web Scraping
Ọ bụ ihe na-ewute ya na nkà na ụzụ nke ndị na-eme ihe na-emetụta ihe ọjọọ ejiriwo ọtụtụ ihe nchebe ghara ịrụ ọrụ. Iji mebie ihe ahụ, ị ​​ghaghị iji Imperva Incapsula mee ihe iji nweta ebe nrụọrụ weebụ gị. Ọ na-eme ka ndị niile bịara na saịtị gị kwadoro.
Nke a bụ otú Imperva Incapsula na-arụ ọrụ
Ọ na-amalite usoro nkwenye ahụ site na nyochaa mkpado nke HTML. Nchọpụta a na-ekpebi ma ọ bụrụ na onye ọbịa bụ mmadụ ma ọ bụ bot ma ọ na-ekpebi ma ọ bụrụ na onye nleta ahụ dị mma ma ọ bụ obi ọjọọ.
A pụkwara iji aha IP. A na-anakọta data IP site na ndị agha ahụ. A ga-enyocha nlegharị anya site na nke ọ bụla n'ime IP ndị ọzọ.
Ụdị omume ịghara ime ihe bụ ụzọ ọzọ iji chọpụta bọtịnụ obi ọjọọ. Ha bụ ndị na-etinye aka na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke arịrịọ na usoro ihe nchọgharị na-akpali mmasị. Ha na-agbasi mbọ ike imetụ aka na ibe weebụ n'otu oge dị mkpirikpi. Ụdị dị otú ahụ dị oke enyo.